Nzira yekuita sei michina yako ichioneka apo mumwe munhu ari kutsvaga Amazon yako targeted keywords?
Maererano nekushambadzira kwemashamba emangwana, 55% yezvinhu zvose zvekutsvaga kwemaInternet dzinotanga kuAmazon. Amazon yakave yakatonyanya kufarira nzvimbo yekutsvakurudza kupfuura Google pamusoro pekutsvakurudza kwemiti. Gore rapera, nyika ino yakakurumbira yekudzosa nzvimbo yakadarika $ 107 mabhiriyoni zvekutengesa. Icho chinoreva kuti inodarika $ 12,000,000 mukutengesa nguva imwe neimwe pamusana. Haufungi kuti nhamba idzi dzinonzwika zvinoshamisa here? Ndinotenda izvi statics inonyatsogutsa uye inokurudzira kuvaka bhizinesi muAmazon - wohnung in zrich gesucht.
Zvisinei, vatengesi vakawanda vari muIndaneti vanonetseka kuti Amazon ichagadzirisa muzvikwereti zvayo uye inopedza bhizimisi ravo kukura. Izvo zvinotyisa hazvisi zvisinganzwisisiki, uye zvinogona kuva zvechokwadi zvichienderana nebasa renyu rebhizimisi. Zvisinei, ngozi iyi inofanira kutora. Kubwinya kweAmazon kunopa hupfumi hwakawanda hwekutengeserana kunobatsira vatengesi kuti vawane mari yavo. Amazon inoita kuti zvikwanisike kuwedzera mararamiro ayo ebhizinesi rako pachako. Zvese zvaunoda ndezvekutevera mitemo yemuyo weAmazon.
Mazano okuwedzera kuonekwa kwako kuAmazon search
Zviise iwe panzvimbo yevatengi vako. Paunotenga kubva kuAmazon, chii chaunowanzoongorora pakutanga? Zvechokwadi, kuongororwa kwevatengi vatsva. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti vamwe vanhu vanogutsikana nechinhu chauri kuda kutenga. Mune mamwe mazwi, vatengi vakawanda vanotoda uchapupu hwehutano hwevanhu kuti vatenge kutenga chisarudzo.
Saka, unoda kutsvaga mikana yekuwana mhinduro dzakanaka dzevatengi vako venguva pfupi. Iwe unogona kupa zvipfeko zvako kana kupa vashandi nezvikwereti kuti uwane maitiro akajeka uye akatendeseka. Mamwe mapepa ane zvifananidzo nemavhidhiyo anoonekwa seanonyanya kukosha kune vatengi vako vanogona. Iwe unoda kukumbira maongorori zvakajeka uye kupa mubairo vese-post-kutenga yekupa. Zvinonzwisisika kuisa mari pakuronga kushandiswa kwekugadzirisa uye kushandiswa kwevashandi kwepamusoro kuti uwane mamwe maitiro ehupenyu. Uye pakupedzisira, unofanirwa kunzwisisa nheyo yekutengesa maAmazi uye kugadzirisa iwe mari yako. Semuenzaniso, unogona kupa vatengi vako zvikwereti uye kumhanya zuva nezuva kuita kuti vave vakavimbika kune marashi yako. Iyo nzira yekutengesa pamwe chete nekuongororwa kukuru uye zvakanyatsogadziriswa zvinyorwa zvinogona kugadzira kukunda Amazon kugadzirisa hurongwa.
Zvakare, zvingava zvine simba kuwana zviongorudzo pane dzimwe nzvimbo dzakadai sezvinyorwa zvekuongorora, mabhuku ehutano, uye nharaunda dzinofarira zvekugarisana nevamwe. Nokusimudzira zviongorudzo zvako pane idzi chiteshi, iwe uchanowana zvakashata zvachose, zvichikurisa maratidziro ako.
chigadzirwa chako chinotarisana pamberi pevatariri vako. Amazon ine zvakasiyana-siyana zvezvinhu zvinotaridzirwa kuti uone kuti zvipi zvigadzirwa kuratidzira kumunhu mumwe nomumwe maererano nezvaanoda uye kutsvaga nhoroondo. Saka iwe unofanirwa kuongorora iyo yekutanga yeEnglish SEO zvinhu uye kuumba yako mazita maererano navo.
Kunyatsoteerera kunofanira kubhadharwa kunzvimbo yako yekutengesa. Inofanira kunge ine zvigadzirwa zvekushandisa zvakakosha uye yako inoshandiswa yakakwirira-volume kutsvaga mazwi. Zvadaro chengetedza kana iwe uchizadza nhare dzose kana kwete. Vanofanirwawo kusanganisira zvaunoda kutsvaga mazwi uye munguva pfupi inotsanangura zvinhu zvinokosha zvechigadzirwa nemafungiro. Tsanangudzo yako inoda kuzadza uye mazwi makuru akafuma. Iva nechokwadi kuti wakanyora zvipo zvose zvechigadzirwa chako muchikamu chinotsanangura.
Nyatsoteerera mazwi ekutsvaga vatengi vako vangashandisa kuwana zvigadzirwa zvako, uye tarisa kuti ndezvipi zvinyorwa zvinowanikwa mumakwikwi ako emakiti ari kushandisa. Muzviitiko zvizhinji, zvinonzwisisika kushandiswa kwemashoko ekutsvaga kwenguva refu ayo vashandise vangaishandisa kushandisa zvimwe zvinhu. Aya mazwi ekutsvaga achakupa mikana yakawanda yekusimudza nzvimbo yako paSERP.
Kunyange zvazvo nguva dzose ichikosha kukuziva kukosha kwekugadzirisa kutsvaga kutsvaga, pfungwa yekutanga inofanira kugara yakatanga. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuisa nguva yako nekushingaira muzviratidzo zvepamusoro kuti upe unhu hwekutanga. Iva nechokwadi chekunyora kwako kune mifananidzo yakanaka uye vhidhiyo.
Tsvaga mikana yekutyaira kutengesa kutengeswa kubva kuAmazon search
Usapedza mikana yako yebhizimisi, kukurudzira maitiro ako paAmazon. Unofunga kufunga zvakakura. Kune mikana yakawanda yekutsvaga kuAmazon. Iwe unowana zvigadzirwa zvako zvinowanikwa mumutambo, shandisa bhurosi kutumira nekushandira pamwe nemafungiro ekukurudzira mu niche yako. Uyezve, iwe unogona kuva nekusimba kwakasimba pane nemaforums uye maBloggi, mapoka ezvekugarisana nevamwe, uye dzimwe nzira.
Chinokosha chekubudirira paAmazon ndikunzwisisa kwakadzama kwemashamba paunotengesa. Saka iwe unofanirwa kuziva kuisa mararamiro ako zvakanaka pamusoro peAmazon search kuti uende kunze kwevanhu vazhinji. Ita zvinhu zvose nemutengi mupfungwa, uye iwe uchaona mugumisiro. Ipai vatengi venyu vane zvinhu zvakanakisisa zvekutengesa uye zvakanakisisa kutsigira vatengi. Nokuita kudaro, iwe uchavandudza yako yekutengesa nhoroondo nekukwevera vamwe vatengi kune zvigadzirwa zvako.
Kupa mutengo wokukwikwidza kuAmazon
Kana iwe uri mutengesi weAmazon, unofanira kutora mune zvekutengesa hondo kana iwe uchida kana kwete. Mutengo wokukwikwidzana ndiwo unhu hukuru hweAmerica hunobatsira vatengesi kukunda Bhokisi Rekushandisa. VaAmerica vanonyanya kubudirira vanotengesa zvishandiso zvakasiyana-siyana kuti vaone mitengo yemusika uye varambe vachikwikwidzana.
Zvisinei, kune dzimwe nzira dzokuti ungaramba sei pane TOP of Amazon e-commerce game. Iwe unogona kufunga nezvekuvandudza kwehutano hwako nekupindura kumashoko ose ane hanya. Iwe unoda kuzvitora iwe semutengesi akanaka uye kupa vatengi vako zvikonzero zvokukusarudza iwe pamusoro pemakwikwi ako.
Zvakare, iwe unofanira kugara uchiita mari yako pakutenga. Nenzira yakadaro, kutyaira kutengesa kwekutengesa kuchakubvumira kuti utenge zvakawanda uye kuderedza kusvitsa kwako mari pakupedzisira.
Cherechedza kuti kununurwa kwekupedzisira uye kushambadzira kunogona kukanganisa mararamiro ako uye kupedza zvigadzirwa zvako muAmazon. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuisa pfungwa pazvikanganiso zvakaderera zvekutsvaga semafambisi asina kutakura, purasi yakaora, uye kunze kwezvikwata. Zvakakosha kuti zvigadzirwa zvako zvigare zviri muzvikwata nokuti zvinoshanda sechikonzero chekukunda Bhodhi raNotoro uye neAngland yakawanda. Kana iwe ukakwanisa kutumira zvinhu zvako nekukurumidza uye zvakarurama, Amazon ichakupa mubayiro wezvakanaka zvinotengesa mutengesi.
Tsvaga mazano uye mikana mitsva kuAmazon
Kune mikana yakawanda yekuwedzera kutengesa kuAmazon. Iva nechokwadi chekuti iwe unoshandisa zvose zvavo kuti uwedzere huwandu hwemabhizimisi emari. Iwe unogona kuedza kubatana nemamwe mabhii eAmazon kuti uwedzere mararamiro ako uye uwane mabhizimisi matsva.